Questex inotanga yegumi yegumi musangano weCaribbean & Incentive Travel Exchange muCuraçao
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Curacao Kuputsa Nhau » Questex inotanga yegumi yegumi musangano weCaribbean & Incentive Travel Exchange muCuraçao
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Curacao Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kutsvaga yakavhura yegumi yegore musangano weCaribbean & Incentive Travel Exchange (CMITE) nhasi ku Santa Barbara Beach & Goridhe Resort muWillemstad, Curaçao.
CMITE inounza zvakazara zvakamisikidzwa US neCanada-based musangano varongi uye vanokurudzira vatengi pamwe neCaribbean-based vapepeti kwemazuva maviri nehafu ematanho ehukama hwekutengesa uye akarongedza musangano mumwe-kune-mumwe mumakamuri ega. Chiitiko chakarongeka pamwe nevadyidzani kubva kuECO DMS uye neCuraçao Yevashanyi Bhodhi.
"Chiitiko cheCMITE chave kutanga kukuru, nekuda kwenzvimbo dzinogadzira netiweki uye inzvimbo nyowani inonakidza kune vatinopinda muCuraçao yakanaka," akadaro Jill Birkett, Chiitiko Director weQuestex. “Chiitiko chedu chechiitiko cheMICE ndicho chega chinopa misangano yeumwe neumwe munzvimbo dzakavanzika dzemakamuri emahotera emhando yepamusoro uye zviitiko zvinonakidza zvekubatana, zvichipa kukosha kukuru kune vanotengesa nevatengi zvakafanana. Santa Barbara Beach & Golf Resort inopa musanganiswa wakanaka wenzvimbo dzemisangano, mahombekombe, gorofu uye nzvimbo dzekutandarira dzinotsvaga nevatengi vedu pavanenge vachironga zviitiko zvavo zveCaribbean. ”
Chiitiko chakavhurwa zviri pamutemo mangwanani ano apo vaenzi vafarira kudya kwemangwanani vasati vaenda kunzvimbo yavo yakavanzika, kune mumwe-kune-mumwe. Zuva richapera nemukana wekushanyira Marriott Curaçao achiri-asina kuvhurwa kuti agamuchire uye kushanya kunoteverwa nekushanya kuRenaissance Curaçao Resort neCasino yezvinwiwa, dhizeti uye kutamba pasi penyeredzi dziri pamvura yeWillemstad, uko vatengi nevatengesi uchave nemukana wekuzorora uye kuzorora uchiramba uchivaka hukama. Vhiki rinovimbisa kufara nekushomeka kwevaraidzo yemuno, chikafu chechokwadi, uye zvechivanhu zvinonyudza zviitiko.
Vatengesi vanosanganisira mitsara yekufambisa, vashanyi vekushanya, makambani manejimendi ekuenda, nzvimbo dzakatsvakirwa, mahotera, nzvimbo dzekuchengetera uye spas. Vatengi vanomiririra makiyi ekurudziro ekutenga zvikamu zvinosanganisira vekambani vanokurudzira vatengi nemakambani ekukurudzira, uye vanoronga musangano.
Zviitiko zveMicequex Travel Group zveMITI zvakaratidza kuve zvinobudirira nekuva chete murongi wekupa zvakavanzika, musangano mumwe-kune-mumwe, nepamusoro-we-mutsetse kudzidziswa uye mikana yemasaiti yekusangana nevekuronga zviitiko, pamwe nekurudziro vatengi.